भारतलाई होइन फास्ट ट्रयाक बनाउन नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ - www.sahayatra.com भारतलाई होइन फास्ट ट्रयाक बनाउन नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ - www.sahayatra.com
Home > Bichar > भारतलाई होइन फास्ट ट्रयाक बनाउन नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ
वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि भारत भ्रमण सकेर सोमबार नेपाल फिर्ता हुदैछन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विशेष दूतका रुपमा भारत भ्रमणमा गएका निधिले भारतीय भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्री देखी प्रतिपक्ष कँग्रेस आइका उपाध्यक्ष राहुल गान्धीसँग भेट गरे । उनको भेट एउटा दूतकोरुपमा मात्र भएको मान्न सकिन्छ तर संचार माध्यममा धेरै कुराहरु आएका छन् ।
विशेषगरी नेपालमा बन्ने फास्ट ट्रयाक र द्रुतमार्ग भारतले बनाउन चाहेको र सो का लागी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निधिलार्इ महरा बनाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रियतामाथी भारतले सदियौ देखी हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गरेको नाकाबन्दी र नेपालको संविधानलाई लिएर जनाएको असन्तुष्टी त्यसका केही उदाहरण हुन् ।
नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । नेपालको आफ्नो संविधान छ, निती, नियम छ । आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षमता छ । तर पनि भारत नेपालमाथि सधैभ हस्तक्षेप गर्न पछी परेको छैन । नत नेपालका राजनीतिक दल उसको हस्तक्षेविरुद्ध लाग्न नै सकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानलार्इ भारतले अहिलेसम्म समर्थन गरेको छैन । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतको हस्तक्षेप उचित थिएन । नेपालले नेपाली राष्ट्रीयता र नेपाली जनताका निमित्त, जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधीबाट संविधानको निर्माण गरेको हो । अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रले स्वागत गरेको नेपालको संविधानलार्इ ा भारतले अनावश्यक चासो दिएर मदेसी नेतालाई प्रयोग गरेर संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिनु निचपन र आफनो औकात देखाउनु हो ।
दुवै मुलुकका जनता आपसी मित्रता, सद्भाव, शान्ति र एकता चाहन्छन । तर भारत सरकार यस विषयमा किन अनभिज्ञ छ । केही कुरामा नेपालको पनि कमजोरी होला, सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विकास निर्माणको कार्यमा नेपाल सरकारले सधै विदेशी नै खोजिरहनु पक्कै पनि देश र जनताका लागि हितकर पक्ष होइन ।
के हामी विकास कार्यमा असक्षम छौँ त ? आत्म चिन्तन सरकारले गर्नै पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति शेर बाहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक बनाउन भारतीय कम्पनलाइ दिने षड्यन्त्र गर्नु सरासर गलत हो । नेपाली सेना विकास निर्माणको काममा अघि बढेको छ । कैयो कठिनाइका चट्टानहरु छिचोल्दै सेनाबाट सडक निर्माण भएको छ । हरेक विकाश कार्यमा सेनाको योगदान बढ्दै छ । त्यसैले भने फास्ट ट्रयाक बनाउन विदेशी भन्दा आफ्नै देशको सेनालाइ किन नदिने ?
भारतको नेपाल निती सकरात्मक छैन । नेपालका कैयैँ भूभाग आज भारतमा गाभिएको छ । सिक्किम दार्जिलिङ भारतको अधिनमा छ । ब्रिटिशले हङकङ चीनलाइ सुम्पिसकेको छ भने भारतले गोवा पनि फिर्ता पाइसकेको छ तर नेपालले आफनो भूभाग जुन भारतमा छ त्यो भूभाग अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन ।
१९५० को सन्धिको आडमा भारत नेपालमाथी हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसतर्फ नेपाली नेताहरूको थ्यान जाने की नजाने ? जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तो, जुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आखिर किन भारतको गुलामी गर्न छोड्दैन । यो एउटा गम्भिर बिषय हो । नेपाल भारत सम्बन्ध सकरात्मकरुपमा अघि बढन पर्छ यो नेपाली र भारतीय दुवै देशका जनताको चाहना हो । तर, नेपालले भारतसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर झुक्नु हुँदैन । आफ्नै स्रोत, साधनमा फास्ट ट्याक बनाएर नेपालले पनि केही गर्न सक्छ है भनेर देखाउनुपर्छ । यो नेपालका लागि अवसर र चुनौतिको विषय हो । जहाँ करोडौँ नेपालीको स्वाभिमान र गौरव जोडिएको छ ।
Item Reviewed: भारतलाई होइन फास्ट ट्रयाक बनाउन नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ Rating:5Reviewed By: Shesh Narayan Jha